Warbaahinta Caalamka Oo Somaliland Ku Ammaantay Nidaamka Ganacsiga Xorta Ah!...
Tuesday January 04, 2022 - 01:30:27 in Wararka by Super Admin
Johannesburg(Xogreeb.com)-Warbaahinta caalamka ayaa majeeratay nidaamka Ganacsiga xorta ah ee ka hano-qaaday guud ahaan Jamhuuriyadda Somaliland, iyada oo hannaanka ganacsi ee caasimadda Hargeysa lagu tilmaamay mid la mid ah suuqyada ganacsiga ee magaalooyinka ugu waaweyn caalamka sida Rotterdam, Oslo iyo Minneapolis.
Warbixin ay daabacday warbaahinta Daily Maverick oo fadhigeedu yahasy dalka South Africa, ayaa lagu sheegay in Jamhuuriyadda Somaliland uu ka jiro Kobac dhaqaale, ganacsi xor ah iyo nidaam maaliyadeed oo ku xidhan caalamka intiisa kale, isla markaana si fudud looga helayo dhammaan adeegyada fududeeya ganacsiga guud.
Reer Somaliland waxay leeyihiin isku xidh caalami ah iyo fursadda ka mid noqoshada nidaamka maaliyadeed ee caalamka. Xawaaladaha caalamiga ahi waa halbawlaha dhaqaalaha Somaliland, waxayna u taagan tahay hal-abuurnimada bangiyada loo wada-dhan yahay oo ku dhex jira waddan aan la aqoonsanayn, sidaas darteedna si adag ugu xidhan bangiyada caalamiga ah,” ayaa lagu yidhi warbixintan.
Warbxintu waxa kale oo ay xustay in hannaanka dhaqaale ee Jamhuuriyadda Somaliland uu yahay mid indhaha caalamka ku soo jeedinaya dedaaladeeda hagar la’aanta ah. "Sifadan dhaqaalaha Somaliland waa mid maalin walba xasuusinaysa Caalamka dedaalka hagar la’aanta ah ee ay ku kobcinayso dhaqaalaha iyo garaadka ganacsi ee dadkeeda”
"Helista fursaddu waa inay noqotaa mudnaanta Afrika. Marka ay dalku sameeyo waxqabadyo waxtar leh oo dhaqaale ahaan faa’iido u leh dadka, waxay u abuuraan natiijooyin wanaagsan naftooda iyo qoysaskooda. ‘Yareynta faqriga iyo abuurista barwaaqada asal ahaan waa laba shay oo kala duwan, balse Hal-abuurka khaaska ah ee Somaliland waa mid xasuustiisa leh,” ayuu yidhi Efosa Ojomo oo ah cilmi-baadhe sare oo ka tirsan Machadka Clayton Christensen.
Waxaa wuxuu ku daray, "waddada loo maro barwaaqada waxaa loo maraa dhimista faqriga, laakiin yaraynta faqriga, nasiib darro, qof kastaa wuu faqiirayaa.” Waxaan kaliya u baahan nahay inaan tixgelinno $1.2 trillion (qof muxaafid ah) oo ah kaalmada horumarineed ee lagu shubay qaaradda 30-kii sanno ee la soo dhaafay. taasoo caddayn u ah cilladaha mashruuca yaraynta faqriga ee hadda jira.
Taa bedelkeeda, waxaan u baahan nahay inaan sameyno doorashooyin wanaagsan oo ku saleysan xaqiiqooyinka caalamiga ah ee maanta.
Waxaan xog-ogaal u noqday ganacsiga aadka u xoogan ee caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland, halkaas oo ay si isdaba joog ah uga dhaceen doorashooyin dimuqraadi ah, ka dib markii ay ku dhawaaqeen inay ka madax-bannaan yihiin Soomaaliya oo ah dawlad aan shaqayn. Halkaas waxaa ka jira ganacsi xoogan oo xor ah, kaas oo u muuqda in uu u socdaalayo heshiisyo adag oo dhinacyo badan leh, waana suuq caalami ah oo leh dhammaan adeegyada fududeeya ganacsiga.